Home Wararka Somaaliyey Farmajo waa Kaas Doorashana waa soo Socotaa ee Dalkaaga ka Nax.
Somaaliyey Farmajo waa Kaas Doorashana waa soo Socotaa ee Dalkaaga ka Nax.
Dad badan ayaa taageero weyn u muujiyey Farmajo markii uu dalkaan taladiisa uu kala wareegayey dowladdii ka horreysay ee Xasan Sheekh Maxamuud oo aan la isweydiin war maxaa ka khaldan ee iyadii oo dhan hal mar inta laga wareegay loogu guuray Farmajo, maantana shallaay laga joogo.
Qof walba oo damiir dadnimo leh waxaa uu garan karaa waxa uu sameeyey Farmajo inaysan ahayn wax laga filan karay xataa qof masuuliyad hoose haya mid intaas la’eg iskaba dhaafe.
Farmajo waa madaxweynihii dalka, waana qof Ilaahay hortiisa ugu dhaartay shacbiga inuu ilaalin doono distuurka dalka, dadka iyo diinta, hasa yeeshee midkoodna ma ilaalin oo qof walba oo xaq iska dhowrayaa oo aan marqaati been ah fureynin waa u muuqataa waxa uu ninkaas sameeyey.
Haddii dalkeenna uu dumiyey nidaam kalitalis ah ma ahayn inuu iimaankeenna dumiyey, haddii nidaamkaa kali telis ah uu aqoonteenna dumiyey ma ahayn inuu garaadkeenna dumiyey, haddii uu dumiyey aragtideenna ma ahayn inuu Alle ka cabsigeenna uu dumiyo ee waxaay ahayd inaan runta sheegi karno oo aan si caddaalad ah uga warrano xaaladda dalka.
Waxaan aragnaa dad ku leh Farmajo musuqmaasuq ayuu la dagaalay ama mushaar ayuu joogteeyey. Runtii waa ayaan darro weyn in aan dunuubtaas ku dhacnaa aqoondarri iyo eex miidey naga ahaataba. Maxaa ka weyn oo musuqmaasuq ah in CXD Soomaliyeed oo naftooda halis gelinayaa ciyaal wada shabaab ah Madax looga dhigay? Maxaa ka weyn in dhammaan lacagihii Qatar $5 milyan bilkasta iyo tii Turkiga boorso lagu qaato ee Villada iyo Xaruunta NISA la dhigto oo halkaas lagau dullaalo xildhibaanno iyo tuugo kale. Maxaa ka weyn in Safaaradaha oo dhan dhallinyaro reer Farmajo ah lagu safo? Maxaasa ka weyn in xiriirka Kenya loo xumeeyey si ganacsi reereed, walaal macaan Xasan Cabdullahi Farmajo iyo Marwad koowaad loogu gacan geliyo Qaadka oo loo dhacay ilaa 20 shirkadood?
Haddii qeexidda Musuqmaasuq aan dadka wada aqoon qodobka ugu weyn waa (dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery in every sector of the government) anshax -darro ama khiyaano ay sameeyaan kuwa awoodda leh, oo caadiyan ku lug leh laaluush qayb kasta oo dawladda. Hay’addee ka madax bannaan musuqmaasuq maanta sida maamulxumo, nin jecleysi, eex dad lagu shaqaaleeyo iyo hantida ummadda oo si gaar ah loo maamusho. Gobolka Banaadir ayaa si dadban u bixiya dhammaan mushaarooyinka ciidanka iyo Shaqaalaha inta kalana Jeebka Farmajo ayey ku dhacdaa waa maxay musuqmaasuqa ka weyn?
Maxamed Farmajo dalkaan waxaa uu ku celiyey inuu yahay dal ay qoys leeyiihin oo ay xukumaan, waxaana caddaatay inuu yahay qabiili aan weli ka korin wixii uu ka bartay dowladdii Kalitelis ee xoogga lagu riday.
Ciidamada uu ka wada saaray saraakiishii aqoonta lahayd una dhiibay wiilal dhallinyaro ah oo uu hogaanno uga wada dhigay rag ay isku hayb yihiin oo badankood ka tirsan shabaab, inkasta oo ay dhinacaan soo mareen, haddana weli waa shabaab u shaqeeyayaal.
Safaaradaha shisheeyaha oo uu ka buuxiyey wiilal iyo gabdho uu adeer u yahay, kalluunkii oo la xaalufinayo oo uu u saxeexay koox uu isaga wato, qaadkii oo uu xataa ka xishoon waayey inuu walaalkii u xero iyo waxyaabo badan oo dhammaantood banneynaya in lagu maxkamadeeyo cid kasta oo ku taageertaana lala ciqaabo.
Marka uu ruux muslim ah, wadani ah , caaqil ah oo fayow uu ka dacwoonaya madaxdweynaha iyo qoyskiisa inay dhaceen sow maaha wax ku ceeb ah qofkasta oo Somaliyeed?
Waxaad halkaan hoose ka maqli doontaa wax aad ka yaqyaqsaooto inuu ku kacay qof aad u haysato inuu yahay madaxdweynahaagii oo aan haddana xishooneyn ee soo taagan ee qoslaya. Waxay ahayd Farmajo inuu Cabsado, Fahad inuu cararo, kheyrana inuu dhuunto. Laakiin waxaa foolxumo ah in Farmajo uu leeyahay weli ma dhergin ee aan afar kale idin xaalufiyo. Kheyre inuu leeyahay wixii aan dhigay waa la iska illoobayaahe ii fasaxa inaan si fiican markaan idiin kugu booloxoofteeyo aniga oo afka laba taako kala jiidaya oo idin leh waa Markii ugu horreysay oo aniga iyo Farmajo jidka nalaka leexiyey.
Waa yaab war ceeb looma dhinto oo lama soo sheegin Xabaalo ceebeed, laakiin Somali haddaan nahay waan ceebeysan nahay marka aan hogaamiyayaal ka dhigannay kuwa aan aranay.
Gabagabadii, waxaan rajeynaynaa in doorashadaan soo socotaa xaqu soo dillaaci doono, oo habeenka maalinta laga garan doono oo hogaamiyaha beenlowga la garan doono, masuulka wax ma taraha aamusan laga garan doono kan wax u gali kara umadda, dalkana uu heli doono ruux u naxa oo fahmayaha boogaha iyo nabaradda ku yaalla, ruux sabar iyo isu keen nagu wadi kara, ruux maalintey adag tahay aan sharciga ka baqin ee ku difaaca bad iyo berriba, ruux rabbi yaqaanna.
Madaxweynaheenna waa Beenlow, waa kama naxe Dhibta shacabka, waa qabiili xataa Marreexaanka u kala eexda, waa musuq maasuqlow hantida ummadda ku takri fala, waana qof ku liita diinta oo lama yaqaan goor ugu dambeysay masaajidka xafiiskiisa ku dhegan.